Mpitsara Breziliana Iray Mangataka ny Loharanom-baovaon’ny Bilaogera Iray, Mitsapa ny Fetran’ny Fahalalahan-gazety · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Avrily 2017 4:49 GMT
Vakio amin'ny teny русский, English, Português, Español, English
Eduardo Guimarães, ao amin'ny Bilaogy da Cidadania, nandritra ny Fihaonambem-pirenena faha- II an'ireo Bilaogera Tia Fivoarana — tambajotra ao Brezila fantatra fa akaiky amin'ny Antokon'ny fitondrana teo aloha, Antokon'ny Mpiasa. Sary: Rogério Tomaz Jr./Flickr, CC BY-NC 2.0
Nahita ny tenany tafiditra tamin'ny raharaha ara-pitsarana mikasika ny asa sorany momba ny Operação Lava Jato (Hetsika Fanadiovana Fiara), tantara ratsy momba ny kolikoly mahasaringotra mpanam-bola sy mpanao politika am-polony ilay bilaogera Breziliana ankavia ela nihetezana, antsoina hoe Eduardo Guimarães.
Nalain'ny manampahefana ny solosaina finday sy finday roa an'i Guimarães ary nanome baiko hamoaka ny firaketana an-tsoratra ao amin'ny findain'i Guimarães, nampiantso azy ho atao famotorana ilay mpitsara Sergio Moro misahana ny raharaha Lava Jato, ary araka ny filazan'i Guimarães, niezaka nanery azy hampahafantatra ny loharanom-baovaony. Nandray ireo fepetra ireo ny mpitsara na dia eo aza ny zava-misy fa miaro ireo mpanao gazety tsy hampiseho ny fiavian'ny loharanom-baovaon'izy ireo ny lalàmpanorenana Brezila .
Nofoanan'i Moro ny fanapahan-keviny taty aoriana, saingy nanasongadina ny fahalemen'ny rafi-dalàna fiarovana ny famoaham-baovaon'olon-tsotra ao Brezila ny fihetsiny.
Manao izay hanakanana ny ezaky ny tambajotran'ny mpiasam-panjakana mamoaka vaovao tsiambaratelo hohadihadian'ny gazety ireo mpampanoa lalàna ao amin'ny raharaha mitohy Lava Jato amin'izao fotoana izao. Nilaza izy ireo fa anisan'ireo nahazo vaovao tsiambaratelo i Eduardo Guimarães.
Tamin'ny Martsa 2016, nanambara tao amin'ny bilaoginy i Guimarães fa ho ampanantsoin'ireo mpanao famotorana momba ny raharaha Lava Jato ny filohan'i Brezila teo aloha, Luiz Inácio Lula da Silva, sady Antokon'ny Mpiasa ihany koa mba hijoro vavolombelona – izay nitranga tokoa herinandro vitsivitsy taorian'ny famoahana ny tantara.
Malaza ny bilaogin'i Guimarães, Blog da Cidadania (Bilaogin'ny Olom-pirenena) ary miara-dia amin'ny Antokon'ny Mpiasa an'ny fitondrana teo aloha.
Tamin'ny 21 Martsa, taorian'ny didy navoakan'ny mpitsara Moro, nentin'ny Polisy Federaly ao São Paulo an-keriny i Eduardo Guimarães mba hijoro vavolombelona. Nilaza i Guimarães fa noterena hanome ny tenimiafin'ny findainy sy ny solosainy ho an'ny polisy, izay niditra an-keriny tao an-tranony vao maraimbe, ary natao famotorana tao amin'ny foiben'ny polisy tsy misy fanatrehan'ny mpisolovava izy. Nilaza izy fa tratran'ny tampoka tamin'izany rehetra izany, ho azy, efa nahafantatra ny fiavian'ny loharanom-baovaony ny polisy.
Nampiseho ny antontan-taratasy navoakan'ny Polisy federaly tamin'ny 23 Martsa fa nohamarinin'ireo mpanao famotorana ny mombamomba ireo mpiasam-panjakana tamin'ny media sosialy izay niditra tamin'ny tahirin'i Lula tamin'ny taona lasa, ary nisafidy hanaraka ny didim-pitsarana amin'ny famoahana ny firaketana an-tsoratra amin'ny findain'ireo izay miaraka amin'ny lahatsoratra sy “tiako” miandany amin'ny ankavia. Araka ny antontan-taratasy, toy izany no nahitan'izy ireo ny loharanom-baovaon'i Guimarães, talohan'ny baiko nomen'ny mpitsara Moro hamoaka ihany koa ny firaketana antsoratra amin'ny findainy.
Niteraka fihetsiketsehana antserasera goavana teo amin'ny tontolon'ny bilaogy ao amin'ny firenena izany (anisan'izany ireo bilaogera elatra ankavanana) izay niampanga ny zavatra hita fa fanitsakitsahana ny lalàm-panorenana ao Brezila izay manipika ny zon'ny mpanao gazety hiaro ny mombamomba ny loharanom-baovaon'izy ireo. Namoaka fanambarana ofisialy avy eo ny mpampanoa lalàna federaly ho fiarovana ny fepetra noraisina, nilaza fa ny fiarovana voalazan'ny lalàm-panorenana dia tsy mihatra amin'i Guimarães, satria “sehatra hanehoana hevitra manokana sy fampielezan-kevitra ara-politika” ny bilaoginy.
Hoy ny filazana ofisialy avy amin'ny Fitsarana Federalin'i Paranà:
Na dia tsy takiana aza ny mari-pahaizana momba ny asa fanaovan-gazety mba ho lasa mpanao gazety, tsy anisan'izany ny fananana bilaogy. Ny lalàm-panorenana miaro ny tsiambaratelon'ny loharanom-baovao dia mihatra ihany amin'ireo manao ny asan'ny mpanao gazety, na misy na tsy misy mari-pahaizana.
Nihamafy indrindra ny tsikera taorian'ny famoahana ny filazana. Nanambara ny fikambanana tsy miankina Reporters Without Borders fa nampiahiahy fa mpitsara iray dia afaka mibaiko ny famaritana ny asa fanaovan-gazety mifototra fotsiny amin'ny votoatin-dahatsoratra. Niara nanasonia filazana miampanga ny fanapahan-kevitra, izay heverin'izy ireo fa nalaina tamin'ny fotoanan'ny didy jadona miaramila ny Federasiona Nasionaly ny Mpanao gazety sy ny Sendikan'ny Mpanao gazety ao São Paulo.
Na dia i Reinaldo Azevedo, izay manoratra ao amin'ny bilaogy malaza elatra havanana ao Brezila aza mba niaro an'i Guimarães, nanondro ny fisamborana ilay bilaogera ho fanitsakitsahana ny fitsipi-dalàm-panorenana izay miaro ny asa fanaovan-gazety. Mpanao gazety sy mpikatroka maro avy amin'ny foto-kevitra isan-karazany ihany koa no nanatevin-daharana ireo mpitsikera tao amin'ny media sosialy.
Taorian'ny fihetsiketsehana, nanafoana ny fanapahan-keviny ilay mpitsara Moro. Tamin'ny 23 Martsa, namoaka didim-pitsarana mangataka ny tsy hanaovana fanadihadiana ny vaovao rehetra voaangona momba ny fijoroana vavolombelon'i Guimarães izy, ​​ary izay ao anatin'ny fitaovany elekitronika ihany koa. Nilaza ihany koa ny mpampanoa lalàna raha niaro tena fa tsy hamantatra ny fiavian'ny loharanom-baovao navoakan'i Guimarães, izay efa fantatr'izy ireo no tanjon'ny fepetra, fa ny hanangona porofo fanampiny mifandray amin'ireo tafiditra ao anatin'ny vaovao tafaporitsaka.
Inona no azo raha lasa mpanao gazety ao Brezila?
Ny lalàmpanorenana taona 1988 dia manome zo ho an'ny mpanao gazety mba hiaro ny fiavian'ny loharanom-baovaon'izy ireo. Saingy tsy ahitana famaritana ara-dalàna izay sokajiana fa mpanao gazety ny lalàna.
Ny asa fanaovan-gazety teo aloha dia nofehezin'ny Lalànan'ny Gazety, novolavolain'ny fitondrana miaramila tamin'ny taona 1967, izay namaritra ny asa fanaovan-gazety ho ataon'ny mpiasa sy mpiara miasa ao amin'ny orinasam-pifandraisana voasoratra anarana ara-panjakana ihany, ary tsy maintsy nahazo mari-pahaizana momba ny asa fanaovan-gazety. Saingy tamin'ny taona 2009, nofoanan'ny Fitsarana Faratampony izany lalàna izany, milaza fa ahitana “aingam-panahy manohitra ny demaokrasia” izany ary tsy mifanaraka amin'ny lalàmpanorenana vaovao napetraka tamin'ny taona 1988.
Ankehitriny — ao Brezila sy amin'ny sehatra iraisampirenena — tsy misy intsony ny famaritana ara-dalàna momba ny asa fanaovan-gazety. Tsy fepetra amin'ny famaritana azy intsony ny fananana mari-pahaizana na asa amin'ny fampahalalam-baovao mahazatra, ary vao maika manjavozavo ny famaritana noho ny fielezan'ny sehatra fampahalalam-baovao hafa amin'ny aterineto.
Saingy afaka mampiseho ny zava-niainan'i Guimarães fa mihena ny fenitry ny fahalalahan-gazety ao Brezila. Tamin'ny tatitra isan-taona avy amin'ny Reporters Without Borders mikasika ny fahalalahan-gazety, very toerana dimy manerantany i Brezila nanomboka ny taona 2015 ka hatramin'ny taona 2016, mitàna ny laharana faha-104 amin'ireo firenena 180 amin'izao fotoana izao. Ny fivondronan'ny fampahalalam-baovao eo am-pelatanan'ny fianakaviana vitsy manankarena sy ny tsy fisian'ny rafi-pirenena ho fiarovana ny mpitati-baovao no antony lehibe nampilatsaka ny laharana.
17 ora izayBolivia